Iran: Andro fanoherana ny herisetra atao amin’ny biby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2012 2:20 GMT
Tamin’ny taon-dasa tao Iran, orsa volontsôkôlà sy ny zanany kely niharan’ny herisetra sy novonoina no hita tamin’ny kamerà, izay tahaka ireny lalao “mpihaza” ao Samirom, Isfahan ireny. Tafintohina tamin’izany ireo Iraniana maro avy amin’ny toera-tsamihafa.
Nozarain’ny vondrona mpiaro ny zon’ny biby tamin’ny 20 septambra 2011 ilay lahatsary ahitana ny famonoana ireo biby, izay nahatonga ireo mpikatroka nanapa-kevitra fa atokana ho “Andro fanoherana ny herisetra atao amin’ny biby” ny andro 20 septambra. Tamin’ity taona ity no nankalazaina voalohany izany andro izany (sary eo ambony) ary nozaraina tamin’ireo mpikatroka ny zon’ny biby ny “Loka Orsa volontsôkôlà”.
Resadresaka miaraka amin’ireo mpiaro ny zon’ny biby
Resadresaka notontosain’ny ny Global Voices tamin’i Sepehr Salimi, bilaogera sy mpiaro ny zon’ny biby izay nampiasa ny fampahalalam-baovao an’olo-tsotra nandritra ny taona maro ho fanentanana izao tontolo izao ny amin’ny fiarovana ny biby:
Global Voices (GV): Ahoana ny fijerinao ny tambajotra sosialy sy ny fampahalalam-baovao an’olo-tsotra mba hanentanana ny olona mikasika ny zon’ny biby ao Iran?
Sepehr Salimi (SS): Ahitam-bokatra tsara ihany ny fanentanana ny olona mikasika ny zon’ny biby amin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao an’olo-tsotra, toy izany ihany koa ny fanentanana alefa amin’ny onjam-peo sy ny fahitalavitra. Saingy indrisy, ao Iran, tsy misy ny sehatra natokana amin’ny fanentanana sy fandraisana andraikitra amin’ny fiarovana ny zon’ny biby, ka ireo mpikatroka ny fiarovana ny biby sisa no hany mandray andraikitra.
Tsy azontsika adinoina fa firenena midadasika i Iran. Ahitana biby ireo faritra ambanivohitra, saingy indrisy fa tsy mba mandeha amin’ny fampahalalam-baovao izany no tsy mba misy ny fampianarana mikasika ny zon’ny biby. Ny fiparitahan’ny vaovao haingana dia haingana no tombotsoa iray amin’ny fampiasana ny fampahalalam-baovao an’olo-tsotra. Ankoatra izany; samy mandray ny andraikiny amin’ny fiarovana ny zon’ny biby sy ny zavamaniry ny ankamaroan’ny olon-tsotra manerana ny faritra samihafa ao Iran. Soa fa nitombo ny tranonkala sy ny bilaogy miresaka momba ny zon’ny biby sy ny tontolo iainana tao anatin’izay taona vitsy lasa izay. Nitondra fahombiazana goavana ho antsika izany tamin’ny fitomboan’ ny fanentanana sy ny fandraisana andraikitra amin’ny tolom-piarovana ny tontolo iainana sy ny zon’ny biby.
GV: Inona ny fanamby lehibe hatrehin’ireo mpikatroka ny fiarovana ny biby ao Iran?
SS: Tsy isalasalana fa ny tsy fisian’ny lalàna momba ny fiarovana ny biby no tena fanamby lehibe hatrehina, ka raha miseho ny fanararao-paty, tsy misy ny lalàna hampiharina ho fanasaziana izay meloka ary tsy misy ihany koa ny andrim-panjakana mba ahafahan’ireo mpikatroka ny zon’ny biby mitondra ny fitarainana. Tsy ampy ary tsy dia mazava tsara amin’ny vahoaka ny fanentanana atao aminy mikasika ny zon’ny biby ka miteraka fanaovana herisetra amin’ny biby izany. Fanampin’izany, mety mampihena ny tahan’ny famoaham-baovao ny tsy fisian’ny fanohanana avy amin’ny olo-malaza toy ny mpanakanto sy ny atleta ary mety mampihena ny andraikitry ny olo-tsotra ihany koa. Manampy trotraka izany ny fisian’ny herisetra atao amin’ny biby toy ny ao anaty vala fitahirizam-biby (zoo), ny fihazana tafahoatra, ny faharavan’ny trano fonenan’ny biby noho ny fanamboarana fotodrafitrasa indostrialy sy làlana eny amin’ny faritra arovana. Vatomisakana tsy hiarovantsika ny tontolo iainana sy ny biby ao amin’ny firenentsika izany.
GV: Matetika reko ny olona milaza hoe nahoana no zon’ny biby no arovanareo, kanefa tsy mba voahaja mihitsy ny zon’olombelona ao Iran? Ahoana ny hevitrao amin ‘izany “fitarainana” izany?
SS: Inoako fa zavatra roa mitovy ihany ireo [ny zon’olombelona sy ny zon’ny biby] ary raha mijery lavitra izany fotsiny isika dia hitantsika fa ny hiaina finaritra amin’izao tontolo izao no tena tanjona lehibe apetrak’ireo vondrona roa ireo. Raha tratrantsika ny dingana amin’ny fanajana ny tontolo iainana sy ny zon’ny biby, dia afaka mahay mifanaja ihany koa isika. Izany indrindra no antony lehibe hiheverako fa tsy tokony hisy fanavakavahana amin’ireo zavatra roa ireo. Maro ny tranga hitako fa manomboka amin’ny fahazazana ny fampijaliana ny biby ary miafara amin’ny herisetra atao amin’ny olombelona izany rehefa tonga olon-dehibe. Ohatra, raha tadidinareo ny loza mampahonena niseho tao Norvezy tamin’ny fahavaratra farany teo izay olona maherin’ny 100 no notifirina sy novonoin’ilay mpihaza mamba vola. Nilaza ilay atrôpôlôgy malaza, Albert Schweitzer, fa 90% ny mpamono olona no mandray anjara sy faly mampijaly ary mamono biby manomboka ny fahatanorany. Tranga matetika hitan’ny FBI amin’ireo andianà mpamono olona izany. Fehiny, mba hisian’ny fiarahamonina vanona, dia tsy tokony hisy fisarahana eo amin’ny zon’ny biby sy ny zon’olombelona. Samy mponina miaina amin’izao tontolo izao avokoa isika. Ka raha mitsofoka an-keriny ao amin’ny toeram-ponenany [biby] isika, dia manosiosy ny zon’izy ireo. Koa ankehitriny ary ho mandrakizay, andraikintsika ny miaro azy ireo.
Anaty faritra manana toetr’andro maina ny firenentsika raha ny ara-jeogragika. Mampitombo ny voka-dratsy ny asan-draolombelona amin’ny fanimbana ny tontolo iainana ny tsy fahampian’ny rano.